Warshadda daboolka albaabka dabka, shirkado keena - Shiinaha Soosaarayaasha albaabka dabka dabka
• Xarkaha dabka waxaa loogu talagalay albaabbada dabka ka caaggan, wuxuu dabooli karaa baahida hawo qaadashada nolol maalmeedka wuxuuna ku siin karaa iyo difaac aad u fiican dabka iyada oo loo marayo ballaarin deg deg ah kaligeed oo dabka ah, taas oo ka hortageysa dabka iyo gaaska kulul. • Waxay ku habboon tahay albaabbada dabka iska caabiya & darbiyada qaybaha ilaa 60 daqiiqo oo ah iska caabbinta dabka • Cabirka xajmiga dabka: Unugga ugu yar waa 150mm * 150mm, Horizontal iyo toosan is dul saaran, dhumucdiisuna tahay 40mm. set caadiga ah waa 1 grille + 2 saxan wejiga
60 daqiiqo nidaamka daboolka glazing;
30 daqiiqo nidaamka daboolka glazing;
Dab-qiimeynta Drop Down Seal GF-B09
Waxaa tijaabiyey heerka Yurubta ah ee BS / EN-1634 mudo 2 saacadood ah oo hoos u dhigeysa shaabad hoos u dhigeysa, farsamo isku xir afar afarta ah, oo ku habboon albaabada leh boosaska ku yaal caleen albaabka Inta lagu jiro rakibida, waxaa jira 34mm * 14mm iyada oo loo marayo booska hoose ee albaabka. Dhig badeecada dhexdeeda, oo ku hagaaji daboolka iyo shaabad ku xir labada dhinacba boolal (ama isticmaal boolal si aad uga hagaajisid xagga hoose ee xarigga xiritaanka). Isticmaalka sheygan wax saameyn ah kuma yeelanayo qaabka guud ee albaabka. • Dhererka ： 380mm-1800mm • Farqiga dhejinta ： 3mm-15mm • Dhamee ...
Hantida • Waxyaabaha uumiga ah ee lagu daboolay daboollada caagga ah ee la bakhtiiyey.
Hantida • Waxyaabaha uumiga ah ee lagu daboolay maqaarka PVC ee jilicsan taas oo sare u qaadaysa muuqaalka isla markaana lagu heli karo midabbo kala duwan. Cabbirka (mm) Xidhmada (kartoonka) RM0706 7 × 6 100m / gariiradda RM0802 8 × 2 100m / gariiradda RM1002 10 × 2 100m / gariiradda RM1004 10 10 4 100m / gariiradda RM1302 13 × 2 100m / gariiradda RM1502 15 × 2 100m / gariiradda RM1802 18 & ...
Hanti • Waxyaabaha uumiga ka baxa oo ay ku daboolan tahay sanduuq adag oo xoojiya muuqaalka isla markaana lagu heli karo midabbo kala duwan • Flipper caag ah, ujeeddadiisu tahay dahaadhka dhawaaqa. Iyo sidoo kale ka jooji qiiqa iyo gaaska kulul inta u dhexeysa marxaladda hore ee dabka. • Seddex meelood oo wax soo saar ah oo leh flipper ilmada. • Kala beddel flipper xulashadaada. Tirada Xogta (mm) Nambarka Qeybta 10 × 4 YZ1024 YZ1024-2 YZ1024-3 YZ1024-4 15 × 4 YZ1524 YZ1524-1 YZ1524-2 YZ1524-3 YZ1524-4 20 × 4 YZ2024 ...
• Waxaa lagu sameeyay maadada intumescent, heerka balaadhinta 5 jeer, 15 jeer iyo ilaa 25 jeer. • Max.width 640mm, dhumucda caadiga ah 1mm, 1.5mm iyo 2mm. • Waxay ku habboon tahay dahaadhka gudaha ee albaabbada dabka, buuxinta armaajooyinka iyo sanduuqyada wax lagu keydiyo, iyo sanaadiiqda korantada. • Cajalad xabag leh ama aan lahayn. Baaxadda Qaybta Baaxadda (mm) dhumucdeeda (mm) Dhererka Isbalaadhinta (gariiradda) FS64002 640 2 30、15、5 100m & FS64015 640 Customized FS60015 640 1.5 30、15、5 100m & FS64001 640 1 30、15、5 1 ...
• Waxaa lagu sameeyay maadada intumescent, heerka balaadhinta 5 jeer, 15 jeer iyo ilaa 25 jeer. • Dhumuc leh 1mm, 1.5mm iyo 2mm. • Goynta suufka xirmada xirmada iyo suunka suunka, albaabada xirmaya iwm.
Hantida • Waxyaabaha uumiga ah ee lagu shubo sanduuqa adag ee kor u qaada muuqaalka isla markaana lagu heli karo midabbo kala duwan. Isku rakibo mashiinka otomaatiga • Ku rakibid sahlan oo leh cajalad adag oo dhejis ah • Isku-xoqidda, maaddada asaasiga ahi hoos uma dhici doonto. Nambarka Qaybta Tirada Xogta (mm) YZ1014 10 × 4 YZ1514 15 × 4 YZ2014 20 × 4 YZ2514 25 × 4 YZ2516 25 × 6 YZ3014 30 × 4